FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA TERRAIN - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika terrain
Sophie, 1 taona (aloha) ary Oscar, 9 mos. (aoriana), sary nahazoana lalana avy tamin'i Jenelle L. Harden
Lisitry ny alika tertera mifangaro sisintany
Ny Border Terrier dia alika kely matevina. Tery ny soroka sy ny vatana. Ny elanelana misy eo amin'ny maso dia somary malalaka. Fohy ary fohy maizina matetika ny vavony, ary mijanona kely sy somary malalaka ny sakana. Mainty ny orona. Matanjaka ny nify raha manaikitra ny hety. Ny sofina kely dia miendrika V, apetraka amin'ny sisin'ny lohany, milatsaka manakaiky ny takolaka ary mazàna miloko mainty. Ny maso salantsalany dia hazelavo mainty. Mahitsy ny tongotra eo anoloana ary tsy mavesatra loatra. Ny rambony antonony dia matevina kokoa eo am-potony sy eo amin'ny taper. Border Terriers dia manana palitao fohy sy matevina ary matevina izay tonga amin'ny loko mena, mena ary manga, manga sy manga, na wheaten. Mety misy fotsy kely eo amin'ny tratra. Ila-bava maizina no tadiavina ao amin'ny peratra fampisehoana.
Ny Border Terrier dia mpihaza kely mailo. Tena mailamailaka, vonona hanery amin'ny toerana tery hisamborana quarry izay mety ho amin'ny lafiny hafa. Mahafinaritra azy ireo ny milalao amin'ny ankizy. Alika tia olona sy malemy paika izay mikendry ny hampifaly ny tompony no mahatonga azy ireo ho mora zatra. Terrier kely mafy orina sy malefaka ity dia mpiambina tsara, ary mety hitraka, nefa tsy masiaka. Aza hadino izany mifanerasera tsara amin'izy ireo . Ny zana-kazo dia tokony hatao zatra amin'ny tabataba mafy raha mbola tanora izy ireo mba hialana amin'ny fahamenarana be loatra. Ny alika kely sy ny sisin-tany Border Terriers dia tena mavitrika, saingy hikororosy rehefa olon-dehibe raha omena fanatanjahan-tena be dia be izy ireo. Ny teriteran'ny sisintany dia toy ny mihady azy fa tsara ny mametraka fanamafisana fanampiny eo ambanin'ny fefy. Tsara amin'ny saka sakafom-pianakaviana raha mifanerasera aminy, na izany aza, io tertera mihaza io dia manana instincts mahery ary tsy tokony hatokisana biby fiompy tsy kaninina toy ny hamsters , kisoa ginea , bitro , ary vorona . Hamarino tsara fa ianao dia alika mafy orina, matoky, tsy miova mpitondra entana, hisorohana Syndrome kely alika , ary fanahiana fisarahana .
Haavony: Lehilahy 13 - 16 santimetatra (33 - 41 cm) Vavy 11 - 14 santimetatra (28 - 36 cm)
Milanja: Lehilahy 13 - 16 pounds (6 - 7 kg) Vavy 11 - 14 pounds (5 - 6 kg)
Mora amin'ny Canine Epileptoid Cramping Syndrome (CECS), fantatra ihany koa amin'ny hoe 'Spike's Disease.' Ity dia olana ara-pahasalamana kaninina fantatra vao haingana sy aretina canine lova ao amin'ny Border Terriers. Indraindray dia mety hafangaro amin'ny epilepsi canine izy io. Izy io koa dia heverina ho aretina metabolika, neurolojika na hozatra.
Ny Border Terrier dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Tsy miasa an-trano antonony izy ireo ary ampy ny tokotany kely.
Ny sisin-tanin'ny sisin-tany dia nihaza hihaza ary manana tanjaka sy tanjaka lehibe. Mila fanatanjahan-tena be dia be izy ireo, izay misy a dia an-tongotra lavitra isan'andro .
Alika kely 2 - 8, 4 - 5 eo ho eo
Ny palitao mateza sy matevina dia mila borosina isan-kerinandro ary asehoy ara-pananahana indroa isan-taona. Ny zavatra dia endrika voajanahary tanteraka. Ny Border Terrier dia mandena kely na tsy misy volo ary tsara ho an'ireo marary allergy. Mandroa raha tsy ilaina.
Tany amin'ny havoanan'i Cheviot akaikin'ny sisin-tanin'i Angletera sy i Ekosy no niteraka ny Border Terrier voalohany. Ny karazany dia mety ho iray amin'ireo karazana terriers tranainy indrindra any Great Britain. Ny tantsaha dia nanana olana tamin'ny amboahaolo namono ny tahiriny ary ny Border Terrier dia niara-niasa taminy handroaka ny amboahaolo avy tao an-davany ary namono azy ireo. Ampy kely izy ireo hanaraka amina amboadia ho any amin'ny tany fa ampy haharaka an'ireo soavaly ihany. Matetika ny alika dia tsy nohanin'ny tantsaha tamin'ny fanantenana fa hampisondrotra ny hazandranony ho avo kokoa izany ary tsy maintsy mihaza izy ireo mba ho tafavoaka velona. Niaraka tamin'ny amboahaolo izy ireo nihaza otter, marten, ilay badger masiaka, totozy ary voalavo. Androany raha alika mpiara-miasa ny Border Terrier, dia mbola afaka manompo alika tsara izy, manampy amin'ny fifehezana verinia. Ny Border Terrier dia neken'ny British Kennel Club tamin'ny 1920 ary ny American Kennel Club tamin'ny 1930. Anisan'ny talenta an'ny Border Terrier ny: fihazana, fanarahan-dia, mpiambina, haingam-pandeha, fankatoavana mifaninana ary fanaovana hafetsena.
I Tigi zanak'alika Border Terrier anay amin'ny 12 herinandro no nanao ny sary nataony modely voalohany.
Ity dia Tyler, fananan'i Jim sy Kathy Robinson. Sary nahazoana alàlana avy amin'i Ristle Border Terriers
Hamish the Border Terrier amin'ny faha-6 taonany, nefa mbola alika kely fotsiny ao am-pony, ary araka ny ahitanao azy dia mankafy ny saka nofinofiny. Hamish dia zanakalahin'i Tyler (Tyler sary etsy ambony).
Ny fihazakazahan'ny Tompondakan'i Etazonia sy Kanadiana, KayLee, ho an'ny sisintany, Master EarthDog aka 'Jake' - fananan'i Lee sy Kay Anderson avy any Shady Cove, OR, Etazonia i Jake.
Vera amin'ny 7 taona (ankavanana) ary Graham amin'ny 5 taona (havia)
Hijery ohatra bebe kokoa momba ny Border Terrier
Sarin'ny sisin-tany 1
Sarin'ny sisin-tany 2
St Bernard sy ny lehibe Pyrénées Mix
voromahery afangaro amin'ny hound basset
Zavatra tendrombohitra alika mpiandry ondry bernese Mix
Akita sy alemà mpiandry ondry Mix
mifangaro beagle sy shar pei